တရုတ် MVS ဒေါင်လိုက် Axial စီးဆင်းမှုနှင့်ရောနှောထားသောစီးဆင်းမှုရေမြုပ်စုပ်စက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ Tongke
MVS ဒေါင်လိုက် Axial စီးဆင်းမှုနှင့်ရောနှောထားသောစီးဆင်းမှုရေမြုပ်စုပ်စက်
MVS စီးရီး axial-flow pumps AVS စီးရီးရောနှောစီးဆင်းသည့်ပန့်များ (ဒေါင်လိုက် Axial စီးဆင်းမှုနှင့်ရောနှောထားသောစီးဆင်းမှုရေစုပ်စက်) သည်ခေတ်မီသောနည်းပညာများကိုချမှတ်သောနည်းလမ်းဖြင့်အောင်မြင်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုများဖြစ်သည်။ အသစ်ပန့်များ၏စွမ်းရည်သည်ယခင်စက်များထက် ၂၀% ပိုကြီးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အဟောင်းများထက်3~ 5% ပိုမိုမြင့်မားသည်။
တစ်ခုတည်းသောအဆင့်အဆုံးစုတ်ယူခြင်း centrifugal အမျိုးအစား NFPA FM fi ...
ဒီဇယ်အင်ဂျင် Long Shaft ဒေါင်လိုက်တာဘိုင်မီးဘေး pump
API610 ANSI ဓာတုဖြစ်စဉ်အဆင့်ရေနံဓာတုဗေဒ ...
MS လျှပ်စစ်ဖိအားအမြင့်သုံးမျက်နှာသန့်စင်သောရေ ...
အလျားလိုက် Split ကို casing centrifugal ပင်လယ်ရေ destin ...
MVS ဒေါင်လိုက် Axial စီးဆင်းမှုနှင့် Mixed flow submersible s ...
Mobile အရေးပေါ်ယာဉ်ဒီဇယ်အင်ဂျင် Drive Dry Se ...
ချိန်ညှိနိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်အားသာချက်များရှိသည် ကြီးမားသောစွမ်းရည် / ကျယ်ပြန့်သောခေါင်း / မြင့်မားသောထိရောက်မှု / ကျယ်ပြန့်သောလျှောက်လွှာ နောက် ... ပြီးတော့။
A: pump station ကသေးငယ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးကရိုးရှင်းပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအရမ်းကျတယ်။ ဒါကဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက် ၃၀% ကနေ ၄၀% ကိုသက်သာစေတယ်။
AVS / MVS Axial စီးဆင်းမှုနှင့်ရောနှောထားသောစီးဆင်းနိုင်သောရေစုပ်စက်များ၏စီးရီးသည်သံမဏိကြေးနီသို့မဟုတ်သံမဏိများကိုသွန်းလောင်းနိုင်သည်။
AVS / MVS Axial စီးဆင်းမှုနှင့်ရောနှောထားသောစီးဆင်းမှုရှိသည့်ပန့်များသည်တံတောင်ဆစ် cantilever တပ်ဆင်ခြင်း၊ ကောင်းစွာ cantilever တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်တွင်း cantilever installation များအတွက်သင့်လျော်သည်။
1. စွန့်ပစ်ပစ္စည်း Grid
4.Water အဆင့် switch ကို
ရှေ့သို့ ရှည်လျားသော Shaft ဒေါင်လိုက်တာဘိုင်ပင်လယ်ရေစက်မှုလုပ်ငန်းစီးတီးရေကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးရေနုတ်မြောင်း pump
အချင်း DN350-1400 မီလီမီတာ
စွမ်းရည် 900-12500 m3 / h
ဦး ခေါင်း ၂၀ မီတာအထိ
အရည်အပူချိန် 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
1.Suction ပိုက် - စာအုပ်ငယ်၏အောက်ခံပုံဆွဲအရသိရသည်။ ရေအောက်ရှိစုပ်စက်၏အသေးငယ်ဆုံးအတိမ်အနက်သည်ပုံဆွဲထဲရှိဒေတာထက်ပိုကြီးသင့်သည်။
2. စွန့်ပစ်: ခတ်အဆို့ရှင်နှင့်အခြားနည်းလမ်းများ။
3.Installation: MVS စီးရီးတံတောင်ဆစ် cantilever တပ်ဆင်ခြင်း, ကောင်းစွာ cantilever တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ကောင်းစွာ cantilever တပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
နှစ်အတန်ကြာသောမော်တာ (MVS series) ပါဝါအဆင့် - လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် GB755 နှင့်ကိုက်ညီသည်
အခြေခံတပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား - IM3013
ဗို့အား: 355kw, 380V 600V 355KW, 380V 600V, 6kv, 10kv အထိ
insulator တွင်လည်းလူတန်းစား: F ကို
ဒီအမျိုးအစားနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုစက်မှုတံဆိပျရှိပါတယ်။ ရေနှင့်ထိတွေ့သောပထမဆုံးတံဆိပ်ကိုကာဗွန်ဆီလီကွန်နှင့်ကာဗွန်ဆီလီကွန်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယကို graphite နှင့် carbon silicon တို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
MVS AVS စီးရီးများတွင်ယိုစိမ့်ကာကွယ်မှုအာရုံခံကိရိယာရှိသည်။ မော်တာ၏ရေနံအိမ်သို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးသေတ္တာပေါက်နေသည့်အခါအာရုံခံသည်သတိပေးချက်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးအချက်ပြမှုကိုထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။
MVS စီးရီး၏အောက်ခံမော်တာ၏အကွေ့အကောက်များသောအခြေအနေတွင်အပူကာကွယ်ပေးသည်။ အပူလွန်ကဲသောအခါသတိပေးချက်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မော်တာသည်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
MVS စီးရီး axial-aliran စုပ်စက် AVS စီးရီးရောနှောစီးဆင်းသည့်ပန့်များအသုံးပြုမှုအပိုင်းအခြား - မြို့ကြီးများရှိရေပေးဝေမှု၊ ရေလွှဲစနစ်များ၊ မိလ္လာရေနုတ်မြောင်းစနစ်၊ မိလ္လာစွန့်ပစ်ခြင်းစီမံကိန်း။
•စံ sump pump
•ကောင်းစွာညွှန်ပြ - မြင့်မားသောလေဟာနယ်စုပ်စက်စွမ်းရည်
• ၂၄ နာရီယုံကြည်စိတ်ချရမှု
•မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်
ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှန်ဟိုင်း Tongke Flow Technology Co. , LTD
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - Mr Seth Chan
ANS (V) စီးရီးနှစ်လုံးစုပ်ယူနိုင်သောအပြား ...
API610 ANSI ဓာတုဗေဒအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရေနံဓါတုဗေဒ ...
TWP စီးရီး Mobile Two treys ဒီဇယ်အင်ဂျင် ...
GDL Self- စုတ်ယူခြင်းဒေါင်လိုက်စင်တာများစွာစင်တာ ...
MS လျှပ်စစ်ဖိအားအမြင့်သုံးမျက်နှာစင်ကြယ်သော ...
LDP စီးရီးတစ်ခုတည်းအဆင့်အဆုံး - စုတ်ယူခြင်းအလျားလိုက် ...
စက်ရုံလိပ်စာ - ရှန်ဟိုင်း၊ ကျင်းဖူခရိုင်၊ အမှတ် ၁၁၁၊ Shenjiabang လမ်း၊